बालिका बिक्रीको अभियोगमा ‘ठिले’ पक्राउ « प्रशासन
बालिका बिक्रीको अभियोगमा ‘ठिले’ पक्राउ
नुवाकोट । वाह् वर्षीया बालिकालाई भारतमा लगेर बिक्री गरेको अभियोगमा घ्याङफेदी–७ का ४४ वर्षीय मानबहादुर तामाङ ‘ठिले’लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
ठिलेमाथि ती बालिकालाई दस वर्षअघि भारतमा लगेर बिक्री गरेका अभियोग लागेको छ । उनका विरुद्ध १० भन्दा बढी महिलालाई भारतमा लगेर बिक्री गरेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा परेको प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
नुवाकोटको घ्याङफेदीसहित मकवानपुरको साविक हाँडिखोला गाविस वडा नं. १ चकरीमकरीमा समेत बस्ने गरेका ठिलेको मुख्य पेशा मानव बेचविखन रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नुवाकोटका ती बालिकालाई काठमाडौँमा काम लगाइदिने भन्दै २०६५ साल वैशाखमा ठिलेसहित पाँच जनाको टोलीले भारतको कोलकत्तामा लगेर बिक्री गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । भारतीय प्रहरीले त्यहाँको एक वेश्यालयमा छापा मार्दा बेचिएको एक महिना पछि नै ती बालिकालाई उद्धार गरी ‘नेपाल गृह’ नामक संस्थाको संरक्षणमा राखिएको थियो । दुई वर्षसम्म ती संस्थाको संरक्षणमा रहेकी ती बालिका वि.सं. २०६७ देखि काठमाडौँस्थित ‘नेपाल गल्र्स’ नामक संस्थाको संरक्षणमा बस्दै आएकी छिन् ।
नुवाकोटका दुई युवतीलाई भारतमा लगेर बिक्री गरेको प्राप्त उजुरीको आधारमा दलाल खोजी गर्दै जाँदा ठिले पक्राउ परेको प्रहरी उपरीक्षक बोहराले बताए । बालिकालाई आफूले बिक्री गरेको स्वीकार गरेकाले ठिले विरुद्ध जिल्ला अदालत नुवाकोटमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए ।
बालिकालाई भारतमा लगेर बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न अन्य चार जना अझै फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
केही दिनअघि नुवाकोटबाट दुई महिलालाई भारतमा लगेर बिक्री गरेको अभियोगमा दुई जनालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ । आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि पक्राउ परेका दुबै जनालाई भारतबाट नुवाकोट ल्याउन लागिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । रासस
Tags : बालिका बिक्री